63 Kanadiana novonoina tany Etazonia ny fijanonana Iran noheverina ho fahasimbana antoka?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » 63 Kanadiana novonoina tany Etazonia ny fijanonana Iran noheverina ho fahasimbana antoka?
Raha ny balafomanga Iraniana dia manafika ny tobin'ny seranam-piaramanidina amerikana any Iràka ary izao tontolo izao miandry ny hanafihan'i Etazonia an'i Iran, ny Fiaramanidina Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena Flight PS752 dia nanomana ny sidina 752 hiainga avy any Teheran mankany Kyiv. Raha nijanona ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ambonin'ny lanitra Iraniana ary nanambara ho faritra tsy misy sidina ataon'ny manampahefana maro.
Ny sidina Lufthansa sy Austrian Airlines mankany Teheran dia nihodina tamin'ny sidina afovoany hisorohana ny Air Iran Air Space,
Tsy nieritreritra ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Airline International Ukraine fa misy antony hampihemorana ny sidina. Ity fanapahan-kevitra ity tamin'ny farany dia mety nampisy ny ekipa 9, ary mpandeha fiaramanidina 167 namoy ny ainy tamin'ny talata.
Tsy nisy miaramila amerikanina novonoina tamin'ny fanafihana nataon'ny Iran tamin'ny US Airbases roa tany Irak. Na izany aza, 82 ny Iraniana, 63 Kanadiana, 11 Okrainiana, 10 Suède, 4 Afghana, 3 Alemanina ary 3 ny teratany anglisy izao no azo lazaina ho fahasimbana antoka rehefa novonoina izy ireo tamin'ny sidina 752 Okrainiana avy any Teheran ka hatrany Kyiv.
Ny praiminisitra kanadianina Trudeau dia mila valiny ary nampanantena ny fireneny Kanada dia hanana andraikitra lehibe, Ka ny marina dia hivoaka rehefa mpandeha 138 avy any Iran ho any Canada no novonoina tamin'ny fiaramanidina Okrainiana Airline B737 minitra taorian'ny niaingany avy tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Teheran.
Ny endrika 63 kanadiana novonoina tamin'ity fiaramanidina ity dia navoakan'ny CBS androany.
Rehefa niainga tao afovoan'io toe-javatra sarotra io ny fiaramanidina Okrainiana dia mety ho lasibatra tsy nampoizina ho an'ny balafomanga fananganana rosiana nianjera tamin'ny fiaramanidina rehefa nihanika ny 8000 metatra ambonin'ny renivohitra Iran.
Nilaza ny tompon'andraikitra Okrainiana Airline (UIA) amin'izao tontolo izao fa tsy tompon'andraikitra isika ary tsy misy atahorana ny fiaramanidina: Nandà ny tale jeneralin'ny orinasa Dykhne fa manana antony tokony hiandrasana olana ny UIA. "Manome toky aho fa ny fiaramanidintsika rehetra dia mety manidina," hoy izy.
Araka ny filazan'i Dykhne, ny fiaramanidina Boeing 737-800 izay nianjera dia vaovao, novidina tamin'ny 2016 avy hatrany tamin'ny mpanamboatra. Ny fitsapana ny serivisy farany natao dia ny 6 Janoary.
Rivotra noho izany fivoarana izany ny olom-pirenena Iraniana tahaka ny sisa amin'ny tontolo sivilizasiona. Na izany aza, nanizingizina ny manampahefana Iraniana fa noho ny tsy fahombiazan'ny mekanika no nahatonga ny fianjerana, saingy tsy avelany hanao fanadihadiana i Boeing.
Nilaza ny tompon'andraikitra amerikana fa mino izy ireo fa ny Boeing 737-800 avy any Etazonia dia voan'ny balafomanga, hoy ny CBS. I Ukraine teo aloha dia nilaza fa mandinika raha fitokonana balafomanga no nampidina ilay fiaramanidina - saingy nolavin'i Iran izany.
Ny porofo amin'ny zanabolana mpitsikilo dia milaza fa ny sidina mpandeha fiaramanidina Iraisam-pirenena Okrainiana dia mety maty voatifitry ny balafomanga mpiady an'habakabaka iraniana tao Iran, Manamafy ny tompon'andraikitra amerikana.
Ny filoha amerikana Trump dia nibitsika hoe: Ny Betako dia niniana natao. Tsy manao fahadisoana toa izany fotsiny ianao. ”
Ilay mampalahelo fianjerana ny fiaramanidina sivily dia mampiseho amin'ny olona rehetra manerantany fa ny ady dia miteraka vokatra tsy ampoizina mandratra fo.
"Ilay mampalahelo fianjerana ny fiaramanidina sivily dia mampiseho amin'ny olona rehetra manerantany fa ny ady dia miteraka vokatra tsy ampoizina mandratra fo. Mila filoha mahatakatra izany isika. Dump Trump 2020 ″, no valin-kafatra nataon'ny mpitarika ny antoko Demokraty.